Ungazigcina njani iinwele zakho zilungiswe kakuhle? | Amadoda aQinisekileyo
Xa kuziwa ekuthetheni ngeenwele, sonke siye sanosuku xa sizijonga esipilini kwaye sifumanisa ukuba zonke azidilizi kwaye azilawuleki, zifezekisa iinwele ezingafakwanga.
Ngaba uziva ukhankanyiwe? Ngaba uyafuna ukuyiphepha? Ke, qaphela iingcebiso zethu:
Yihlambe rhoqo: Nangona kubonakala kucacile, kuphela kwendlela ekhoyo yokuphepha ukuba iinwele zakho zinamafutha. Sebenzisa ishampu efanelekileyo kuhlobo lweenwele onazo kwaye ukuba unako, yenze kusasa.
Sebenzisa isomisi seenwele: Ewe yeba le gadget kwiqabane lakho. Beka isomisi kungekho ngaphantsi kwe-20 cm entlokweni yakho kwaye uyenze ngendlela oyithandayo.
Ukulungisa iimveliso: Kukho iigels, i-fixative, i-gel yeenwele, ii-waxes okanye amagwebu kwintengiso enceda ukugcina iinwele zakho zilawulwa kangangeeyure. Kodwa ungazisebenzisi yonke imihla (yinike "ikhefu" ubuncinci iintsuku ezi-2 ngeveki), ukuze iinwele zakho zikwazi "ukuphefumla" kwaye ufumane ioksijini efanelekileyo.
Isiphumo Cap: Ukuba xa uphakama, iinwele zakho azijongi ngendlela othanda ngayo, musa ukuthwala ikepusi. Yonke into oya kuyenza kukuyenza mandundu ngakumbi.
Ngoku yabelana ngeemfihlo zakho nathi sonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungazigcina njani iinwele zakho zilungiswe kakuhle?
UDic maicol sitsho
Ndiyile ukufaka iimveliso kodwa ubuncinci iintsuku ezimbini ngeveki apho kwaye zithini ezinye iintsuku
UJose V sitsho
Ngokumalunga nengcaciso engentla ... "ukuphumla" kweentsuku kukuba usebenzisa imveliso (umzekelo ukusukela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu) ... kwaye uyeke ukuyisebenzisa ngempelaveki ukuze iinwele ziphefumle .. uyifumene? 😉
Phendula kuJose V
eeee indlela embi ngayo ijeli okanye ezinye izinto eziqala ukuwisa iinwele kude kube yeyokugqibela onayo kungcono ukuyayina yeyona ilungileyo
kwaye lingakanani igwebu
Iinwele zam ziyaxakaniseka, ndiyazidibanisa, kodwa ndiyawela umceli mngeni, ndingenza ntoni fa
iinwele zam zihliselwe phantsi ukuba ndingenza ntoni
Kutheni le nto sisozela emva kokwenza uthando?
Iindidi ezahlukeneyo zeenyawo